HEALTH Archives - Page5of7- XYZ NEWS
သွားတွေ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ဘဝတလျှောက်မှာ တခါတော့ ကြုံတွေ့ကြရစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုယိုယွင်း ပျက်စီးမှုတွေဟာ အေးလွန်းတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပူလွန်းတဲ့ အရည်တွေကို သောက်သုံးမိတာကြောင့်နဲ့ မာလွန်းတဲ့ အစားအစာတွေကို မကြာခဏ စားသုံးမိတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သုတေသန ပညာရှင်တွေက …
February 6, 2020 By Editor HEALTH
ကြို့ထိုးခြင်းကို အမြန်ဆုံး သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းကောင်း (၁၀) ခု
၁။ နားကို လက်နှင့် ပိတ်ထားပေးပါ။ သင့်လက်ချောင်းများနှင့် နားကိုသက်သာစေပါတယ်။ စက္ကန်​့(၃၀) ခန့်အထိ ပိတ်ပေးထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါက သင့်နားရွက်နောက်ရှိ ပျော့ပျောင်းသောနေရာကို ဖိထားပေးခြင်းဖြင့် ကြို့ထိုးခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ၂။ ရေတစ်ငုံလောက် သောက်ပေးပါ။ ရေကို ပိုက်အသုံးပြု၍ …
February 5, 2020 By Editor HEALTH
သင့်အချစ်ဆုံးသူနဲ့တောင် မျှဝေသုံးစွဲဖို မသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (7) မျိူး
ကျွနု်ပ်တို့ဟာ သွားတိုက်တံ ဘီးစတဲ့ တကိုယ်ရည်ပစ္စည်းတွေကိုသူများနှင့် အတူတူမသုံးသင့်ကြောင်းသိကြပါတယ်။ သိူ့သော် အချို့သော တကိုယ်ရည်ပစ္စည်းများကိုတော့ မမျှဝေသင့်မှန်းမသိပဲ မျှဝေသုံးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ လူအတော်များများမသိကြသေးတဲ့ မျှဝေသုံးစွဲဖို့မသင့်သောပစ္စည်းများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ (1)နှုတ်ခမ်းနီတောင့်များ သင့်သူငယ်ချင်းက နှုတ်ခမ်းနီမေ့ကျန်ခဲ့လို့ ငှားတယ်ဆိုပါစို့။ သင်ငှားမှာလား? တကယ်တော့မငှားသင့်ပါဘူး။ရေယုန်ကဲ့သို့သောရောဂါများဟာ နှုတ်ခမ်းနီတောင့်ကနေ အလွယ်တကူကူးနိုင်ပါတယ်။ …
February 1, 2020 By Editor HEALTH
ဘီယာထဲမှာပါတဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးက အသည်းနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာ အကျိတ်တွေကို သတ်နိုင်
ဘီယာထဲက ဟော့ပ်က အသည်းနဲ့ အူမကြီး ကင်ဆာကိုပျောက်စေနိုင်သလား? သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အကျိတ်တွေကို သတ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းကို ၎င်းရဲ့အပွင့်ထဲမှာ တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ • အူမကြီးကင်ဆာ ဆဲလ် တွေကို သတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ပေါင်းတွေလဲ အပင်ထဲမှာပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ် • သူရဲ့ …
January 31, 2020 By Editor HEALTH
နှာစေး ချောင်းဆိုးခြင်းကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း ( ၆ ) ခု
အခုလို ရာသီဥတုအေးလာတဲ့အခါမှာ အအေးမိခြင်းကြောင့်နှာစေးချောင်းဆိုးခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ နှာစေးတဲ့အခါနဲ့ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာ ချွဲဟပ်တတ်တာလဲ ဓမ္မတာပါပဲ။တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကို်ယ်ခန္ဒာကနေ အချိန်တိုင်းမှာ ချွဲသလိပ်များကို ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အနေအထားမှာ မသိသာပဲ နေမကောင်းတဲ့အခါမှ ချွဲများဟာပိုပြစ်ပြီး သင့်ကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ ချွဲသလိပ်ကပ်ခြင်းကို …
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၆ မျိုး
တစ်ခါတစ်လေ အစာမကြေ၊ရင်ပြည့်နေတာမျိုးကြောင့် ဗိုက်အောင့်တာမျိုးကဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဒီလို ဗိုက်အောင့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ လုံးဝမပေါ့ဆဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်နော်… ၁. ရေရှည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း တစ်ခါတစ်လေဗိုက်အောင့်တာမျိုးထက်ပိုပြီး သုံးလထက်ပိုကြာအောင် မကြာခဏအောင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသင့်နေပါပြီ… ဗိုက်အောင့်တာအပြင် ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာစတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိမရှိကိုပါ စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ် …
January 29, 2020 By Editor HEALTH
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ကိုအမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
လူတိုင်းလိုလိုခေါင်းကိုက်ဖူးကြပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၊နေရာကွက်ကိုက်ခြင်း၊နောက်စေ့ကိုက်ခြင်း၊ထိပ်ခတ်နာကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း အမျိူးမျိူးရှိသလို ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာလည်းရှိပါတယ်။ထိုအကြောင်းရင်းများစွာအနက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁.၆ဘီလီယန်လောက်ခံစားနေရပါတယ်။ (၁)ရေနွေးဖြင့်ရေချိူးခြင်း ရေနွေးဖြင့်ရေချိူးခြင်းဖြင့် တောင့်တင်းနေသောကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေတာမို့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဇက်ကြောတက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ရေချိူးဖို့ခက်ခဲပါက ရေနွေးအိတ် ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (၂)ရနံ႔ကုထုံး လာဗင်ဒါဆီကဲ့သို့ …
နှလုံးရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းများ နှင့် ကာကွယ်နည်းများ
-စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ကနေဒါပညာရှင်များရဲ့ လေ့လာချက်များအရ စိတ်ညစ်ခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုများခြင်းနဲ့စိတ်ဖိစီးခြင်းတို့ကြောင့် နှလုံးဆီသို့သွေးထောက်ပံ့မှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့် နှလုံးရောဂါရှိသူတွေကို စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင် နေထိုင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ -လေကောင်းလေသန့်မရခြင်း လူ၁၆၀၀၀ကျော်ကိုလေ့လာရာမှာ လေဆိုးတွေရှူရှိုက်ရသူတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးရောဂါကို ရနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိထားပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းသောမြို့ပြနေလူများထက် ကျေးလက်နေလူများက နှလုံးကျန်းမာရေးပိုကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ -ဒေါသဖြစ်ခြင်း စစ်ဒနီတကသိုလ်ရဲ့လေ့လာချက်အရ အပြင်းအထန်ဒေါသထွက်ပြီးနောက်၂နာရီအကြာမှာ …
( ၁၀ ) မိနစ်ဘဲ အချိန်ပေးပြီး ကျောရိုးသက်သာအောင်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းများ
ကျောရိုးကွေးခြင်းဆိုတာကမ္ဘာတဝှမ်းကလူတွေခံစားနေရတဲ့အရာပါ။ဒါပေမယ့်သင့်တော်တဲ့ကုသနည်းတွေတော့ရှိပါတယ်။သူတို့ဒီအခြေအနေကိုမကုသနိုင်ခင်မှာအိမ်မှာကျန်းမာပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိပါတယ်။BrightSideကလေ့ကျင့်ခန်းတွေရဲ့အရေးကြီးပုံကိုမျှဝေချင်ပြီးကျေးရိုးကောင်းမွန်ဖို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်မှာတွေအပြင်နာကျင်မှုတွေလျော့ပါးစေဖို့နည်းတွေလဲရှာပေးထားပါတယ်။ ၁။တင်ပါးမခြင်း ဘာလုပ်ရမလဲ:ဒူးတွေကွေးပြီးပက်လက်လှန်၍ခြေထောက်တွေကိုကြမ်းပြင်ပေါ်ထိပါ။အစာအိမ်ကိုတင်းစေပြီးကျောကိုဖြန့်ပါ။ထိုအတိုင်း၅စက္ကန့်နေ၍ပြန်လွှတ်ပါ။ ဘာဖြစ်စေလဲ:တင်ပါးနဲ့ကျောအောက်ပိုင်းရဲ့ကြွက်သားကိုတင်းစေတယ်။ ၂။လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်မြှောက်ခြင်း။ ဘာလုပ်ရမလဲ:နဖူးကိုကြမ်းပြင်နဲ့ထိပြီးမှောက်လျက်လှဲပါ။သင့်လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုဖြောင့်ထားပါ။လက်မောင်းတဖက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရေတဖက်ကိုမြှောက်ပါ။ခိုကဲ့သို့မလုပ်နိုင်ရင်တခုချင်းခွဲလုပ်ပါ။သင့်ကျောကိုအောက်ကိုပြန်မချခင်အသက်၂ခါအပြည့်ရှူပါ။တဖက်ကို၁၅ခေါက်ထပ်လုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်စေလဲ:ကျောက်အောက်ပိုင်းကိုပိုသန်မာစေတယ်။ ၃။ ကြောင် နွား ဘာလုပ်ရမလဲ:လက်ကိုမြေပေါ်မှာထားပြီးဒူးထောက်ပါ။ကြောင်ရဲ့ပုံစံလိုမျိုးဝမ်းဗိုကကြွက်သားတွေကိုဆွဲရင်းကျောကိုကွေးပါ။ဖြေလျှော့ပါ။အစာအိတ်ကိုကျစေပြီးနွားပုံစံကိုခေါင်းကိုအပေါ်သို့မော့ပါ။နှစ်ခုပေါင်း၁၀ခါလုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်စေလဲ:ကျောရိုးရဲ့နာကျင်မှုကိုအေးဆေးစေပြီးပိုပြီးပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ ၄။ငှက် ခွေး ဘာလုပ်ရမလဲ: ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကလက်မောင်း ခြေထောက်မတာနဲ့တူပါတယ်။ဒါပေမယ့်လက်ကိုကြမ်းပေါ်မှာထားပြီးဒူးထောက်ရင်းလုပ်ရပါတယ်။သင့်လက်မောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ခြေထောက်ကိုအသက်အောင့်ရင်းဆန့်ပါ။နောက်မတူတဲ့ခြေထောက်နဲ့ထပ်လုပ်ပါ။တဖက်ကို ၁၀ခေါက်ကနေ၁၅ခေါက်လုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်စေလဲ:ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနဲ့ကျောအောက်ပိုင်းကိုတည်မြဲပီးသန်မာစေတယ်။ …
January 27, 2020 By Editor HEALTH
သင့်ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အလေ့အထဆိုး ( ၈ ) ခု
သင့်ကျန်းမာရေးကိုထိမ်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ ကျောက်ကပ်ရဲ့ အခန်းကဟာလဲ အရေးပါလှပါတယ်။ကျောက်ကပ်ဟာ ဆီးစွန့်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းသာမက သွေးနီဥထုတ်ပေးခြင်း၊အခြားသောကလီဇာများမှအဆိပ်အတောက်များစွန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊သွေးပေါင်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိမ်းညှိပေးခြင်း၊သတုဓာတ်များပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိမ်းညှိပေးခြင်းစသော တာဝန်များကိုပါဆောင်ရွက်ပေးတာမို့ ကျောက်ကပ်ကို ကျန်းမာအောင်ထိမ်းသိမ်းဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေမယ့်အလေ့အထဆိုးတွေကို သိရှိပြီး ရှောင်ကြဉ်ဖို့လဲ မဖြစ်မနေလိုအပ်လှပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေသောအလေ့အထဆိုးများမှာ – (၁)ဆီးအောင့်ထားခြင်း သင်ဟာ ဆီးမသွားပဲ ဆီးအောင့်ထားပါက …
January 26, 2020 By Editor HEALTH